Fanka iyo Suugaanta | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	Golaha Wasiirada oo meel mariyay Gudoomiyaha bankiga dhexe (Daawo Sawirada) Kenya oo ka wal-walsan qaraxyo kale oo saacadaha soo socda ka dhaca Magaalada Nairobi Ciidanka Amisom oo maanta sii daayay Gudoomiye Ku Xigeenkii Gobolka Hiiraan Al Shabaab oo maanta si naxariis daro leh u dishay laba wiil oo Soomaaliyeed Dagaalo culus oo ka dhacay Gobolka Baay Qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho Ciidamada Dowladda oo uu dagaal ku qabsaday xaafad ka mid ah Magaalada Muqdisho Ururka Al Shabaab oo gawaari dagaal ku gubay Gobolka Shabeellaha Dhexe Qarax weyn oo caawa gil gilay Magaalada Nairobi iyo khasaaro ka dhashay (Daawo Sawirada) Nin goob caafimaad ku lahaa Magaalada Muqdisho oo ay caawa kaxeysatay Hay’adda Nabad Suggida Fanka iyo Suugaanta
DAAWO: Heestii Fartuun Birimo (Badbaadi Naftaan Baxaysa) 2014 Published on Apr 23 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1325 Reads DAAWO: Heesta “Kenyaati oo idil nooma kala harin” oo ay soo qaadeen kooxda wadaniyiinta ah ee Qeylodhaan – VEDIO Published on Apr 23 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1522 Reads Heeskani waxa uu la magac baxay “Kenyaati oo idil nooma kala harin” waxaana soo qaaday kooxda Qeylodhaan kadib markii ay ka xanuunsadeen sida foosha xun oo umadda Soomaaliyeed ay ula dhaqmayaan...Read More
Kooxda Xidigaha Geeska Afrika oo Hees Tahriib ah oo Qiiro badan soo qaaday(Tolow yaa inoo Maqan)! Published on Apr 22 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1635 Reads Kooxda xidigaha geeska Hees Tahriib ah oo Qiiro badan Tolow yaa inoo Maqan iyadoo la wada og yahay in Tahriibka uu saameyn aan yareyn ku hayo dhallinyada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay markii ay meesha...Read More
DAAWO: Heesta Jamiila – Arooska Jamiila Xasan Garruun Iyo Abdifitah Haji Tigle – Codkii Idiris Tempo.(Muuqaal Cajiib leh) Published on Apr 21 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,166 Reads Waaaaw waa heestii aad wada sugeyseen ee arooskii sanadka ee aan iyo heestii aan ugu tala galey inanta aan abtiga u ahay ree Jamiila Hassan guruun iyo seygeeda Abdi fatax haji tigle waxaan leenahay hambalyo...Read More
Qof Jaceylku uu hayo ma wax buu hagradaa? Halkan ka daawo hees ay ku wada luuqeynayaan Cirro iyo Hodan Published on Apr 18 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1559 Reads Warbaahinta Markacadey.net waxay idin soo gudbinaysaa Hees Jacey oo ay wada qaadayaan Maxamed Cirro iyo Hodan Abdirahman
Arooska Jamiila Xasan Garruun iyo Abdifitah Haji Tigle oo noqday mid aan la arag, Lana maqlin. Published on Apr 16 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 112,450 Reads Arooska Qarniga – Magaalada London ee xarunta wadanka UK ayaa waxaa ku aqal-galay Abdifitah Haji Tigle iyo Jamiila Xasan Garruun oo iyadu ka mid ah wariyayaasha TVga caalamiga ah ee Universal TV....Read More
DAAWO: Hees cusub oo laga bada-dhacay oo uu soo qaaday Al-fannaan Liibaan Jig-jiga – Erayo iyo Laxan aan caadi ahayn Published on Apr 14 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1892 Reads Waa hees cusub oo uu soo qaaday Fanaanka Liibaan Jigjiga, taasoo la magac baxday Yabaal.
Miraha heesta waxaa iska leh abwaan DHisicow waxaana la saaray laxan laga daba dhacay.
BY: Wariye...Read More
Suxufiyada Jamiila Garuun oo ku aqal gashay magaalada London (Hambalyo Jamiila Garruun) Published on Apr 12 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 13,825 Reads Hambalyo Jamila Hassan Gaaruun oo guursatay
Xidigta Saxaafada Soomalida ee qarnigani Jamiilo Xasan Garuun oo dal iyo dibad laga yaqaano kana howl gasha Tv-ga Universal ayaa warar hoose oo aan helayno sheegaya...Read More
DAAWO: Hees cusub oo ay isugu tageen afar kamid ah fanaaniinta kooxda Geeska Afrika Published on Apr 12 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,241 Reads Heestani waa hees cusub waxaana si wadajir ah u qaadaya afar fannaan oo kamid ah fanaaniinta geeska afrika waxaana qaadaya
Lammaane- Bk, Nimcaan, Xamda Queen iyo Asma Love
DAAWO: Hees lala dhacay oo kooxda Hilaac Band ay soo saareen kaasoo la magac baxay “DHEEHO” Published on Apr 08 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,539 Reads Heestani oo la magac baxday DHEEHO waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta kooxda Hilaac Band Cabdi Heybe Laambad iyo Leyla Cabdullaahi.
DAAWO: Barnaamij looga hadlay fanka iyo suugaanta laguna marti qaaday fannaaniinta da’da yar – VEDIO Published on Apr 07 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1803 Reads Barnaamijkani oo lahaa xiiso gooni ah waxa uu ka baxay talefishinka Universal waxaana lagu marti qaaday Khadra Ciise iyo Xuseen Bakar oo ah fannaaniin da’da yar ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Actor-ka caanka ah ee Ajay oo dabaal degayo sanad guurada dhalashadiisa Published on Apr 04 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,112 Reads Xiddiga Ajay devgan oo ah Actar miisaan culus ku leh Bollywoodka ayaa maanta waxaa u buuxsantay sanadkiisii 46aad ee ka soo wareegtay xiligii uu dhashay xiddigaa oo muda ku soo jiray Bollywoodka.
Wariyaha weyn ee Cabdullaahi Nuur Kolombo oo ka warramay fanka Soomaaliyeed + Muuqaallo heeso qaraami ah Published on Apr 04 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,180 Reads Heesaha Wadaniga ah ee dhaxal galka ah kuna daabacan Quluubta Wadaniyiinta Soomaaliyeed inkastoo ay aad u badan yahiin misana waxaa jira qaar marka Dhagahaagu ay maqlaan si gaar ah wadnahaaga u taabanaya....Read More
Fadeexad iyo ceeb soo wajahday jilaaga Soomaaliyeed ee caanka ku noqday Hollywoodka Published on Apr 02 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,764 Reads Fadeexad iyo ceeb baaxad weyn ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahhday jilaaga Soomaaliyeed ee caanka ah ee Barkhad Cabdi ka dib markii dhawaantaan waaxda socdaalka ee dalkaas Mareykanka ay ka xayireen...Read More
Lady Gaga oo si la yaab leh u xustay sanad guurada dhalashadeeda . Published on Apr 02 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1981 Reads Fanaanada iska yaabiska badan ee reer Mareykan “Lady Gaga” ayaa u dabaal degtay dhalashadeeda 28aad, eyadoo ku qabatay Roseland Ballroom, New York.
Gaga ayaa soo bandhigtay xaflad heeso ah...Read More
Hooyada dhashay Ranbir kapoor oo ku faraxsan in wiilkeeda guursado Katrina Kaif . Published on Apr 02 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1985 Reads Warar lagu qoray bogga Bollywoodka ayaa tilmaamaya in atariishada Katrina Kaif iyo saaxibkeeda Ranbir Kapoor ay is guursanayaan sanadka 2015.
Dhanka kale Neetu Kapoor oo ah hooyada dhashay Ranbir ayaa...Read More
Daawo: Hees Jaceyl oo aad u macaan oo ay ku wada luuqeynayaan Hodan iyo Jooqle Published on Apr 01 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,055 Reads Heeskani waa hees cusub oo ay sanadkan 2014 horraantiisa wada qaadeen Hodan Abdirahan iyo Abdi Shire Jamac Jooqle.
Erayada heeska waa mid aad u macaan oo Jacayl ah.
BY: Wariye Maxamed...Read More
Ahlaam Al-shamsi oo taageerayaasheeda u dheegtay qiimaha Salada . Published on Apr 01 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1760 Reads Fanaanada caanka ah ee reer Imaaraad Ahlam Al-Shamsi, ayaa taageera yaasheeda ugu gudbiysay bogga ay ku leedahay Twitterka, faa’iidada salaadu leedahay, eyadoo tiri Salaadu waxey dhibaatada iyo...Read More
Rihaana iyo Drake oo ku balamay in ay axdi daacad ah wada Saxiixdaan . Published on Apr 01 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1590 Reads Waxey go’aansadeen Rihanna iyo saaxibkeeda cusub ee Drake iney wada galaan axdi daacadi ku dheehantahay si xiriirkoodu u noqdo mid aan jabin, arintaan waxey si gaara u farxad gelisay Rihanna.
Shaakiro oo Saartay Muqaalka Taajka Arooskeeda oo holcayo . Published on Mar 31 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1884 Reads Fanaanada reer Colombia ee Shakira oo maalmo ka hor soo saartay heesta lagu magacaabo “Empire” soona dhigtay bogga ay ku leedahay Youtube-ka, ayaa waxaa daawaday dad ku dhaw 5-milyan oo ruux.
Salman Khan iyo Sharuh Khan oo sanado badan kadib Filim cusub wada jili doono… Published on Mar 24 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1776 Reads Soo saaraha caanka ah ee Bollywoodka Rohit Shety ayaa sheegay inuu qeyb Hindia ka samey doono filimka “Bad Boys”, una dhiibi doono xiddigaha Shah Rukh Khan iyo Salman Khan.
Rohit Shity ayaa...Read More
Aktarka weyn ee Amir Khan iyo Deepik Padukone oo noqonayo Hal koox . Published on Mar 19 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1820 Reads Warar soo baxay ayaa sheegaya in atarootaha caanka ah ee Aamir Khan iyo atariishada da’da yar ee Deepika Padukone ay noqonayaan hal koox.
Labadaan jilaa ayaa kawada shaqey doona filim shirkada...Read More
Dadka kazoo qeyb galaya xaflada Kim Kardashian iyo Kanye oo lagu xiray shardi la yaab leh . Published on Mar 19 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,042 Reads Lamaanayaasha Kim Kardashian iyo Kanye West, ayaa sheegay waxyaabaha looga baahanyahay dadka doonaya iney soo xaadiraan xaflada arooskooda, eyagoo sheegay xujo layaab leh.
Qofki raba inuu kasoo...Read More
Daawo Jannifer Lopez oo soo saartay Muqaalka heessta “Luh Ya Papi”. Published on Mar 18 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,119 Reads Fanaanada caanka ah ee Jennifer Lopez ayaa soo muuqaalka clipkeeda cusub ee ” I Luh Ya Papi”, kaas oo si cajiiba loo duubay.
Clipka ayaa ku bilaabanaya kulanka Lopez iyo soo saaraha heesta, kadib...Read More
Atariishada Caanka ah ee Kaajol oo sheegtay in Ranbir Kapoor ka wanaagsanyahay Aktaro Waaweyn . Published on Mar 18 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1730 Reads Atariishada caanka ah ee Kajol oo horay ula soo shaqeysay xiddiga Shah Rukh Khan, ayaa rumeysan sida ay tiri in Rabin Kapoor kaga wanaagsanyahay dhanka jiliinna xili ay marti ku eheed barnaamijka Koffee...Read More
Mohamed Assaf oo shaaca ka qaaday xiliga uu duubi doono heesitiisa Koobka Aduunka . Published on Mar 17 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1599 Reads Fanaanka da’da yar ee reer Falastine Mohamed Assaf ayaa sheegay waqtiga uu duubayo heesta uu kaga qeyb gelayo koobka aduunka ee ka dhacaya dalka Brazil bisha June, isagoo sheegay in uu Aprin duubayo...Read More
Jilaa Soomaaliyeed oo Qeyb ka ah 3 filim oo Mareykan ah oo dhawaan soo bixi doonto (Daawo Goosgooska ). Published on Mar 17 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,345 Reads Jilaa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Hakeem Shady oo ah aktar hore usameeyey filimada gaagaaban (short film) Sidoo kalena qeyb ka qaatay jilista iyo codeenta game ki caanka ahaa ee CALL OFF DUTTY MW3...Read More
Shaliene Woodley oo si wanaagsan u amaantay George Clooney . Published on Mar 17 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1507 Reads Atariishada Hollywoodka ee Shailene Woodley ayaa tilmaantay in George Clooney yahay waalidkeeda labad, eyadoo sheegtay iney wax badan ka baratay tan iyo marki ay soo gashay caalamka fanka.
Warbixi dheer...Read More
Angelina Jolie oo u tafaxeydatay Barashada Cunto Karista . Published on Mar 15 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 1643 Reads Atariishada caanka ah ee Angelina Jolie oo ah hooyada lix caruura, ayaan weligeed ilmaheeda u gelin jikada, mana siin sida la sheegay wax ay gacanteeda kusoo sameysay, maxaayeelay si wanaagan uma taqaano...Read More
Lady Gaga oo uu Kasoo yeeray Hadal fajac iyo xishood daro ah . Published on Mar 13 2014 // Fanka iyo Suugaanta // 11,523 Reads Fanaanada iska yaabiska badan ee reer Maryekan Lady Gaga, ayaa ka dhawaajisay arin dood dhalisay, kadib marki ay ay wax caadi ah ku tilmaamtay in walaalkeed uu u tegi karo.
Lady Gaga oo labiskeeda qaabka...Read More
Random Video	Sheeko Gaaban - Rajactu
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka joogtada ah ee golaha wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, kaasi oo looga hadlay ansixinta guddoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Golaha ayaa sidoo kale ka hadlay maamul u samaynta gobolada iyo degmooyinka dalka, iyadoo arrintaasi go’aan laga gaaray. Kaddib markii uu […]